Indlu Eyakhiwe Esihlahleni Yokunethezeka - Ubumnandi obuncane esihlahleni! 🌞 - I-Airbnb
Indlu Eyakhiwe Esihlahleni Yokunethezeka - Ubumnandi obuncane esihlahleni! 🌞
Lamar, Arkansas, i-United States
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Rob
Ukushaywa wumoya kwakho okuncane okwakhelwe esihlahleni se-okhi! Lokhu ngempela kungenye yokokuzithokozisa kwasemaphandleni okungefaniswe esigodini sasehlathini, kuyilapho kuqhele ngemizuzu engu- kuphela kusuka ohlelweni olukhulu lomgwaqo omkhulu nezitolo ezilula. Kungakhathaliseki ukuthi uhamba noma ufuna ukwenza lokhu kube yindawo oya kuyo ngeke udumazeke. I-Grotto ye-Hiker iyatholakala futhi ukuze isetshenziswe ngaphandle kwenkokhiso eyengeziwe ehlanganisa ikhishi nezindlu zangasese ezinama-shower asendlini.
Emaqenjini, siphinde sibe nencwadi yezindaba, ubulula, Ukuzikhethela kanye ne-Solitude.
Lena indawo encane kakhulu, kodwa sipakishe okuningi ngangokunokwenzeka. Unesihlalo sefasitela esinendawo yokudlela, umsebenzi, njll... Sinikeza amanzi, nomshini wekhofi. I-shower egcwele enamaminithi angaba ngu-3 kuphela amanzi ashisayo okuhlanza okusheshayo. Ifriji encane!
I-Union Pacific Railroad engokomlando isebenza ngemuva kwendlu ozokwazi ukuyizwa.
Le ndlu eyakhiwe esihlahleni ibizwa ngokuthi i-Serenity ~ Jabulela ukuvakasha ngokusuka kokujwayelekile!
ubusuku obungu-7 e- Lamar
4.98 · 171 okushiwo abanye
Indlu Eyakhiwe Esihlahleni isemgwaqweni kodwa ihlezi endaweni ethokomele eluhlaza ukuze ikunikeze leyo ndawo yokuphunyuka oyidingayo ngokoqobo. Ungathola konke ongakudinga e-Walmart imizuzu engu-10 phansi endleleni e-Clarksville noma uthathe imizuzu embalwa ukuya e-Dollar General ukuze uthole ukudla okulula okujabulisayo noma yiziphi ezinye izidingo ngenkathi usohambweni lwakho. Hlala ubusuku noma isonto futhi uzoba nakho konke okudingayo!
Ukutholakala kwewashi nxazonke. Indlela engcono kakhulu yokuxhumana nathi uma kwenzeka kuba nesimo esiphuthumayo ukushayela uRob ucingo kodwa ukuxhumana okujwayelekile kungenziwa nge-Airbnb. Phakathi kukaRob noKami, kuhlale kunomuntu ozophendula ngokushesha ku-Airbnb.
Ukutholakala kwewashi nxazonke. Indlela engcono kakhulu yokuxhumana nathi uma kwenzeka kuba nesimo esiphuthumayo ukushayela uRob ucingo kodwa ukuxhumana okujwayelekile kungenziwa n…
Hlola ezinye izinketho ezise- Lamar namaphethelo